Wamkelekile kwi Sunshine Shack
Chitha iholide yakho kwikhaya lethu eliselunxwemeni laseMoody Point. Amabali ethu amabini, 3 BR 2 BA, Sunshine Shack ibekwe kumgama nje osuka kuLwandlekazi lweAtlantiki ekupheleni kwesitalato esikhuselekileyo nesithe cwaka esinezinye izindlu ezintathu kuphela endleleni. Eli khaya liqaqambileyo nelinomoya lizaliswe lilanga elininzi kwaye lityunjwe ngokuthuthuzela kunye nemibala emnandi yonxweme kunye nokwenziwa. Vumela umbono, isandi, kunye nevumba lolwandle lizalise indlu kunye nentliziyo yakho.
Siyihlaziyile ngothando le ndlu yangasese kwaye eli lixesha lokuqala esilinikayo njengerenti. Siyathemba ukuba iinkcukacha kunye nomzamo uya kubonisa indlela esivuya ngayo ukwabelana ngendlu yethu kunye neMoody enhle, eMaine kunye nezinye iintsapho kunye nabahlobo. Yiza ubone into ekhethekileyo malunga neelwandle, ii-Wells, i-Moody, i-Ogunquit kunye ne-Kennebunk, iindawo zokutyela kunye nemisebenzi.
4.65 · Izimvo eziyi-46
Ezinye zeendawo esizonwabela kakhulu kwindawo yaseWells/Ogunquit zibandakanya: I-Wells Harbour apho baneendawo zokutyela, ikonsathi yasimahla rhoqo ngorhatya lwangoMgqibelo (ngexesha) kwi-gazebo, ibala lokudlala elikhulu, kunye nedokhi yokusebenza apho unokubukela iilobstermen. yiza kwaye uhambe, uthathe i-charter yokuloba, ubambe oononkala, okanye urente iikayak kunye neebhodi zokubheqa.
Iilwandle zeWells zenziwe ngeemayile zesanti kunye nokulunga okunetyuwa. Ziquka i-Moody Beach, i-Main Beach (i-trolley stop) i-Crescent Beach kunye ne-Drakes Island Beach. Ezi zizo zonke iindawo ezintle zokubhabha iikayiti, ukufumana ubomi baselwandle kumachibi olwandle kwaye utsibe ngaphaya okanye ubaleke kumaza.
IFama yaseLaudholm kunye neRachel Carson Preserve zombini zikwiWells kwaye ngamaziko endalo agqwesileyo apho umntu unokubukela iiNtaka kwaye uhambe ngeendlela kwaye ubone inguqu entle ukusuka kwihlathi laseMaine ukuya kumachweba anamanzi acwengileyo ukuya kubomi bomgxobhozo wamanzi anetyuwa.
E-Ogunquit sinandipha ukuya ePerkins Cove (i-trolley stop). Oku mhlawumbi kukuqala okanye ukuphela kweMarginal Way, indlela yokuhamba ngaselunxwemeni eneyona mbono inomtsalane kunye nenkalipho yolwandlekazi lweAtlantiki oya kuze uyifumane. I-Ogunquit ineendawo zokutyela ezininzi ezintle, ulwandle olwamkelwa kuzwelonke, ubomi basebusuku obulungileyo kunye ne-Play House eyaziwayo kwihlabathi. Elona candelo lihle kukuba yidolophu elandelayo ngaphezulu kwaye kukuhamba nje okufutshane okanye ukukhwela itroli ukusuka kwindlwana yethu.